IPodcast 9 × 09: I-iPhone X ibangela uvakalelo | Ndisuka mac
Ngenye iveki, iQela lokwenyani leqela le-iPhone y Soy de Mac lidibene ukuze lithethe ngazo zonke iindaba ezingqonge iApple kwezi veki zimbini zidlulileyo, ukusukela kwiveki ephelileyo asikwazanga ukugcina idinga lethu leveki kunye nawe. Ngeli thuba, yonke i-podcast ibisisihloko se-mono apho sithethe khona nge-iPhone X kunye nokubonakala kokuqala phakathi kwabasebenzisanayo be-podcast abaye bayifumana, kuba ayizizo zonke esizifumeneyo okanye siye safumana ithuba lokuyivavanya.
Ukuba ufuna ukusibuza imibuzo iveki yonke, njengoko zisiza kuthi qatha, ungasebenzisa i-hashtag #podcastsapple. Ngexesha lokurekhodwa kwayo, siza kuphendula yonke imibuzo osibuze yona, nokuba inxulumene ne-iOS, i-tvOS, i-macOS okanye i-watchOS, okanye nasiphi na isixhobo se-Apple. Unokusebenzisa i-hashtag ukucela ukuba senze izifundo, uphononongo lwezicelo zeKhayaKit okanye izixhobo okanye izixhobo ze-iPhone, i-iPad, izixhobo zeMac ...
Njengesiqhelo ukuba ufuna ukuthatha inxaxheba kwipodcast yethu bukhoma, ungakwenza oko ngejelo lethu le-YouTube, ukusuka apho sisasaza khona bukhoma kwaye apho bonke abasebenzisi banokusibuza imibuzo esiza kuyiphendula bukhoma, ukongeza ekuthatheni inxaxheba nathi. Ukuba uyafuna yazi ngawo onke amaxesha xa siqala ukusasaza ngqo, kungcono ukuba urhumele yethu Isiteshi se-YouTube ukwaziswa xa usasazo luqala.
Kodwa ukuba ukhetha ukusimamela ngesicelo sakho osithandayo sePodcast, kungcono ukuba ubhalise umjelo wethu we-iTunes apho uza kufumana zonke iipodcast esizipapashileyo ukuza kuthi ga ngoku, kakhulu kwiqela langoku ngokubhekisele kumaqela angaphambili ebekade eyinxalenye yeActualidad iPhone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IPodcast 9 × 09: I-iPhone X ibangela uvakalelo
"Othandekayo uTim Cook", ukugxekwa kweApple kwelona phephandaba libalulekileyo eJamani